कृषि बैंकको फट्याईँ: ऋण दिँदा शेयर काट्ने, भुक्तानीमा हिसाबकिताब नगर्ने ! Bizshala -
कृषि बैंकको फट्याईँ: ऋण दिँदा शेयर काट्ने, भुक्तानीमा हिसाबकिताब नगर्ने !
सो अवसरमा भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेनु दाहालले सरकारी बैंक भएकाले कम ब्याज र सहज तरिकाबाट किसान र सर्वसाधारणलाई ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने बताइन । जनतालाई सहज सुविधा दिन नसके उनीहरूको आकर्षण निजी क्षेत्रको बैंकमा हुने उनले धारणा राखिन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख पार्वती शाहले कृषि विकास बैंकले किसानलाई उपेक्षा गरेको भन्ने गुनासो रहेको भन्दै त्यसलाई मेट्ने गरी काम गर्न सुझाव दिइन् ।